Swamiji – Samata-bixiyaha Shinbiraha! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka June 22, 2017	0 237 Views
MUQDISHO – Dhawaan ayaa Buugga Guinness World Record wuxuu Dr. Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji u aqoonsaday hoyga shinbiraha. Ma ahan ururiye kaas oo ku raaxaysta isu keenista haadda xurriyo duulaysa, hayeeshe waa naxariisle samata-bixiya shinbiraha dabargo’aya, dhaawacan ama laga haajiray ee ku nool dunida dacalladeeda.
Swamiji, helaha xarunta Avadhoota Datta Peetham ashram ee ku taalla Mysuru, dalka Hindiya ayaa u naxariis nuglaa shinbiraha muddo dheer taniyo intuu xusuusan karo. Isaga oo kusoo koray degmada Mekedattu, ee jiifta jinka webiga Cauvery, wuxuu xusuustaa ku bixinta waqtigiisii badnaa daawashada shinbiraha kala jaadka ah marka ay rabaan inay gabaad ka dhigtaan geed ku yaalla duleedka aqalkiisa. Hayeeshe waxay ahayd shil dhacay sanadkii 2011 kaas oo ka dhigay inuu fahmo ujeedkiisa nolosha – badbaadinta haadda dabargo’aysa iyo kuwa laga haajiray inta uu ka haleeli karo. Wuxuuna keynta Mysuru uga dhisay kadin cabbirkiisu yahay 21-acre.
Lix sano kahor, xilli uu booqanayay biya-dhaca ugu dheer dunida ee Angel Fall, dalka Venezuela wuxuu lumiyay tallaabada isaga oo ka dhacay haadaan dhirir la eg 100-foot, wuuna miyir-daboolmay. Kolkii uu soo miyirsaday, Sri Swamiji wuxuu arkay isaga oo ay ku hareeraysan yihiin shinbiro Amazonian ah, wuxuuna sheegay inuu u riyaaqay quruxdooda. Waana taas sababtii uu ugu dhisay hoy lagu xanaaneeyo tarantooda.
Maanta xaruntiisu waxay hoy u tahay shinbiro ku dhow 1,500 oo isugu jira 468 unug-dhamayso oo haaduhu u kala baxaan.
63-jirkan ayaa maalin kasta quudiya haad gaaraysa 4,000.
Previous: 20 June – Maalinta Caalamiga ee Qaxootiga
Next: Baroordiiq loo sameeyey Muslimad lagu dilay Texas
Daawo – Isbitaal lagu daryeelo Maroodiga oo laga furay Hindiya.